Toni Kroos Oo La Weydiiyey Midka Wanaagsan Steven Gerrard, Paul Scholes & Frank Lampard
Tuesday September 08, 2020 - 22:30:33 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Kubbad-sameeyaha khadka dhexe uga ciyaara Real Madrid iyo Germany ee Toni Kroos ayaa rumaysan
in Paul Scholes uu ka wanaagsanaa labada laacib ee kale ee reer England ee Steven Gerrard iyo Frank Lampard, kuwaas oo dooddoodu in muddo ah soo taagnaydn.
Gerrard, Scholes iyo Lampard ayaa si joogto ah ay taageereyaashu isku barbar-dhigayeen, iyadoo ay muuqatay in saddexdooda lagu tartansiinayo bandhiggoodii garoomada Dad badan oo khubaro ciyaareed ku jirto ayaa ku kala qabsamay doodda midka wanaagsan laacibiintan hore, waxaana ugu dambeeyey Michael Owen oo saddexdoodaba kasoo garab ciyaaray, waxaanu ku dooday in Steven Gerrard uu ka sarreeyey labada ciyaartoy ee kaleba Toni Kroos ayaa isaguna qayb ka noqday dooddan, waxaanu u janjeedhsaday dhinaca Paul Scholes oo uu sheegay inuu ka wanaagsanaa Gerrard iyo Lampard Scholes ayaa dhinaciisa hore amaan ugu jeediyey Toni Kroos isaga oo yidhi: "Waxaan jeclaan lahaa inaan ka garab ciyaaro Luka Modric. Aniga wuu iga duwan yahay, sababtoo ah wuu iga orod badan yahay, wuxuu garaaci karaa ciyaartoy, laakiin waxa aan ku arkaa waxyaabaha qaarkood sida maamulidda ciyaarta.
"Marka aan eego labada ciyaartoy ee dhexda uga ciyaara Real Madrid ee koobabka Champions League kula soo guuleysanayay, waxa laga yaabaa inaan u bato dhinaca Toni Kroos. Waa baas bixiye iyo ciyaartoy aad maamule u ah. Dhab ahaantii jidhkiisa kulama loollamo dadka, waxaanu halkan iyo halkaaba ka dhaliyaa goolal adag.
"Haddii aan labadooda kala dooran lahaa, waxa aan jeclaan lahaa Kroos marka loo eego Modric.”
Kaddib hadalkaas, Toni Kroos ayaa la weydiiyey in isaguna uu kala doorto midka wanaagsanaa Scholes, Lampard iyo Gerrard, waxaanu yidhi: "Steven G iyo Frank cajiib ayay ahaayeen, waxay ahaayeen ciyaartooyo layaab leh. Laakiin waxa aad uga duwanaa Scholes.”